छोरा साउदीको जेलमा : बाआमा आँसुको भेलमा कृपया सियर गरिदिनु होला - hamro Desh
छोरा साउदीको जेलमा : बाआमा आँसुको भेलमा कृपया सियर गरिदिनु होला
चितवनको खैरहनी–७, मझुईका २८ वर्षीय उपेन्द्र कार्की ‘ब्लड मनी’ तिर्न नसकेर तीन वर्षअघिदेखि साउदी अरबको जेलमा छन् ।
परदेशमा गएर पैसा कमाउने, राम्रो घर बनाउने र फर्किएर बिहे गरी उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्ने सपना बुनेर ६ वर्षअघि साउदी अरबको हाइलस्थित अल इतियाज कम्पनीमा ड्राइभिङ भिसामा काम गर्न पुगेका उनी तीनवर्ष कटाएर घर फर्किने तयारीमा थिए ।
तर, डिसेम्बर ३१, २०१४ को घटनाले उपेन्द्रको नेपाल आउने तयारी तुहियो । कम्पनीमा काम गर्ने शिलशिलामा राजमार्गमा गाडी चलाइरहेको अवस्थामा विपरीत सडकमा जानेक्रममा पछाडिबाट तीव्र गतिमा आएको कारले उनको गाडीमा ठक्कर दियो ।
उनले चलाएको गाडी अनियन्त्रित हुँदा अगाडिका अन्य दुईवटा कार दुर्घटनामा परेको थियो ।
उक्त दुर्घटनामा साउदी नागरिकको समेत मृत्यु भएपछि साउदी अरबको अदालतले तीन लाख ३३ हजार ५०० रियाल ब्लड मनीबापतको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
करिब ९५ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको ब्लड मनी भुक्तानी गर्न नसके आजीवन कारावास वा मृत्युदण्डको सजाय हुनसक्ने अदालतले फैसला गरेको थियो ।
ऋण खोजेर छोरालाई साउदी पठाएका उपेन्द्रको परिवारसँग ब्लड मनी बुझाउने जायजेथा र क्षमता छैन । साउदी अदालतले फैसला सुनाएको पनि तीन वर्ष ३ महिना पुगिसकेको छ ।
११ महिनाअघि छोरा जेल परेको खबर थाहा पाएका उनका ५५ वर्षीय बुबा सन्तोषबहादुर र ४६ वर्षीया आमा शान्तिको आँखाबाट आँसुको भेल रोकिएको छैन । आमा शान्ति छोराको खबरले विक्षिप्त बनेकी छन् । मानसिक तनावका कारण उनी बारम्बार बिरामी भइरहन्छिन् ।
स्थानीय शान्तमणि नहर्की भन्छन्, “आमा शान्ति छोराको प्रसंग आउनासाथ रुवाबासी गर्न थाल्नुहुन्छ । उहाँको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर हामीले बुबासँगमात्रै उपेन्द्रको कुरा गर्छौं । छोराको पीरले बिरामी पर्नुभएको छ, हामीले सम्झाउनै सकेका छैनौँ ।”
उपेन्द्रका बुबा सन्तोषले रुँदै भने, “छोराले जेलबाट दुईपटक फोनमा कुरा गरेको थियो । यही चैतमा फोन गरेर बा छिटो जेलबाट मुक्त गर्नुप¥यो, ब्लड मनी जम्मा गरेर मलाई यहाँबाट जसरी भए पनि निकाल्नु भनेर बिलौना गरेको थियो ।”
“कम्पनी राम्रो छैन बुबा, आइहालेँ लगानी उठेपछि फर्किन्छु भन्थ्यो, दुर्घटनापछि त केही खबर नै पाइएन । छोरा जेलमा रहेको नेपाली प्रवासी समाज, साउदी अरेबियाले एम्बेसीमार्फत् पहल गरेपछि ०७४ जेठ २४ गतेमात्रै थाहा पायौँ”, उनी भन्छन् ।
उनी पनि ११ वर्ष कतारमा गाडी चलाएर फर्किएका हुन् । भन्छन्, “त्यतिबेला कमाएको पैसाले मझुईमा पाँच कट्ठा खेत जोडेको थिएँ । सम्पत्तिका नाममा त्यही एउटा खेत छ । त्यो पनि बैंकमा रोक्का छ । खेत बेचेर ऋणमुक्त हुन खोज्दैछु । छोरा कसरी बचाऊँ भन्ने पिरले अत्यास लाग्न थालेको छ ।”
छोराले पैसा पठाएर ऋण तिर्ने आशामा उनले तीन कोठाको पक्की घर बनाएका थिए । घर निर्माण नसकिँदै छोरा जेल परेको सुनेपछि कार्की परिवार थप पीडामा परेको छ ।
“बैंकको ११ लाख र गाउँघरमा खोजेको ९ लाख गरी २० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी छ । जग्गा बेचेर ऋण तिर्नमात्र पुग्छ । छोरा फर्केर आइदिए अरु सम्पत्ति केही चाहिएको थिएन”, विह्वल हुँदै उनले भने ।
कतारबाट फर्किएर केही समय गाडी चलाएर हिँडेका उनी अहिले काम गर्न नसक्ने भइसकेका छन् । उनी भन्छन्, “आँखा कमजोर छ, काम गर्न पनि सक्दिन । पैसा नभएपछि गाउँघरमै २–५ हजार सापटी मागेर जीवन गुजारा गर्दै आएका छौँ ।”
तीन सन्तानमध्ये जेठा छोरा दीपेन्द्र परिवारको सम्पर्कमा छैनन् । लामो समयदेखि सम्पर्कमै नरहेपछि जेठा छोराको आडभरोसा नरहेको उनी बताउँछन् । एक छोरीको बिहे भइसकेको छ ।
छोरा जेल परेपछि उनले ‘उपेन्द्र बचाउ अभियान’ सुरु गरेका थिए । सो अभियानबाट नेपाल बैंक लिमिटेडको पर्सा शाखामा २ लाख ४६ हजार ३५५ रुपैयाँ संकलन पनि भइसकेको थियो । बुबा सन्तोष भन्छन्, “तर, यसरी पैसा संकलन गर्दा गैरकानुनी हुन्छ भनेर इलाका प्रहरी कार्यालय, खैरहनीले रोक लगायो, त्यसपछि अभियान नै बन्द भयोे ।”
ब्लड मनीको अभावमा साउदीको जेलमा रहेका उपेन्द्रलाई सहयोग जुटाउन चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिमार्फत् रवि भट्ट ‘रोषी’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाएपछि एनआरएनले ब्लड मनीबापतको कूल रकममध्ये १५ प्रतिशत सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
“एनआरएनका सोम सापकोटा, आरके शर्मालगायतले घरमा आएर १५ प्रतिशत सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ, बाँकी रकम कसरी जोहो गर्ने केही सोच्नै सकेको छैन”, बुबा सन्तोष आफ्नो पीडा पोख्छन् ।
पत्रकारसमेत रहेका भट्ट भन्छन्, “अहिले एनआरएनको सञ्जाल ७८ मुलुकमा छ । सबै शाखाले थोरैमात्र सहयोग जुटाइदिने हो भने उपेन्द्रलाई जेलमुक्त गर्न कुनै समस्या छैन । सबैको सानो सहयोगबाट यो असम्भव पनि छैन । बारम्बार झक्झक्याउँदा १५ प्रतिशतसम्म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
रातभरिको यात्राले समेत अन्तिम गन्तब्य पेला परेन । उज्यालो भएपछि एक गिलास दूध हालेको बाक्लो चिया पिएर केहीबेर घुक्रुक्क सुत्ने चाहना फिक्का भयो । जब गाडीका चक्काहरुले मधेशको माटोमा टेक्यो तब स्थानीय बासिन्दाहरु लोटा उचालेर यत्रतत्र दौडिरहेका भेटिए ।
मैले सोचे, आहा ! अब त बिहान भएछ । तर बिहान हुनु भनेको उज्यालो हुनु हैन, उज्यालो हुनु भनेको बिहान हुनु हैन रहेछ ।
यस्तो लाग्यो कि, ‘हुँदैन बिहान मिर्मिरेमा दुई–चार लोटा देखेर नगए ।’यिनै कुरा गम खाँदै दिउँसोको १२ बजे तिर म सुनसरी जिल्लाको चतरा पुगे ।चतरामा एउटा वृद्धाश्रम छ, जहाँ सम्मानीय राष्ट्रपति बिद्या देवी भन्डारीकी ममतामयी आमा मिथिला पाण्डे बस्नुहुन्छ । लामो समयदेखि उहाँ त्यो आश्रममा बस्दै आउनु भएको छ ।
वृद्धाश्रमको गेट भित्र छिरेपछि पलास्टिकको कुर्सिमा एकजना आमा बसिरहेको देखें । आडैमा कपाल फुलेकी अर्की आमालाई देखेपछि पक्का भयो – राष्ट्रपतिकी आमा उहाँ नै हुनुपर्छ ।सफा लुगामा बसिरहेकी उहाँको स्वभाव शान्त थियो । मैले नमस्कार गरें । समान्यतया हामी नेपालीहरु पहिलो पटक भेट्दा जे जस्तो कुराकानी गर्छौं, त्यही भयो ।आमाले भन्नुभयो, ‘बाबु तिमि काठमाण्डौबाट आए जस्तो त लागेन ।’
पक्कै पनि लखतरान बनेको यो ‘भातमारा’ शरीर काठमाडौंबाट आए जस्तो थिएन ।काठमाडौंका मान्छेमा अलिक फुर्तिफार्ती, हाटहुट हुन्छ ।कमिजको टाँक पनि पुरै नलगाएको, जुत्ताका तुनाहरु फुस्केर लत्रे जस्तो, भालेकट कपाल एकदम कडा जेल दलेर ठाडो परेको । सिङ्गो गाँउ लुट्न जाँदा सात दिन नसुतेको लुटेराको जस्तो जस्तो लाग्थ्यो मेरो शरीर आफैंलाई । मेरो पूर्णकदको हुलिया देखेर सम्मानीय राष्ट्रपतिकि आमा मिथिला पाण्डे डराउनु भएछ ।
मैले भने, ‘आमा, म काठमाडौंबाटै आएको हुँ, फिकर नगरिस्यो ।’खाइस्यो, बसिस्यो, गइस्यो जस्तै यो ‘नगरिस्यो’ किन भनेको भने, मेरो एकजना ठकुरी साथी थियो । विचरा उ निमुखा थियो । तर एकबारको जुनीमा उसको दावी थियो, ‘म राज खानदानी कुल घरानको हुँ । बोलि वचनमा सभ्यता देखाउनुपर्छ । कहिलेकाँही मलाई ‘खुकुरी रम खाइसिन्छ ?’ भन्थ्यो ।
राष्ट्रपतिकी आमा मिथिला पाण्डेसँग कुरा गर्दाका वाक्यहरुमा मैले ‘स्यो’ भनिरहे।जस्तो कि आमा सञ्चै होइसिन्छ ? खाना खाइस्यो? अलि यता बसिस्यो, मेरो कुरा बुझिस्यो । यस्तै, यस्तै ।आमाले भन्नुभयो ‘हेर्नुहोस् बाबु, धेरै समय पहिला यस्तै एकजना मान्छे आएको थियो । क्यामेरा पनि बोकेको थियो । सबैले चिन्छन्, लोकप्रिय पत्रकार हुँ भन्थ्यो । त्यस्तो केही हुन्न मनमा लागेका कुरा भनिदिनुहोस् भन्यो । मैले सुखदुःखका कुरा गरें । तर उसले त सबै उल्टो–उल्टो पो लेखेछ । मैले भनेको कुरा त केही पनि लेखेनछ । उसको मनमा लागेको कुरा लेख्न मलाई भेट्न किन पर्यो त ? कोठमा बसेर जे लेखे नि भयो नि !’ म खिस्स हाँसे।
‘म पत्रकार हैन आमा, उल्टो–उल्टो लेख्ने त्यो को होला चिन्दिन । म त्यस्तो लोकप्रिय नि छैन । बराहा क्षेत्रमा भगवानको दर्शन गर्न आएको थिएँ । पाथिभरासम्म जाने विचार छ । केही मित्रहरुले आमाको समाज सेवाको चर्चा गरेको सुनेको थिएँ । तपाईं बस्ने यो घर बाटो मै पर्ने रहेछ । किन नभेट्ने भन्ने लाग्यो । फेरी तपाईं समान्य आमा पनि हैन । यो देशको राष्ट्रपतीको आमा हुनुहुन्छ । हजुरको दैनिकीप्रति सबैको चासो हुने रहेछ ।’ आमा मुस्कुराउनुभयो ।
यसभन्दा अगाडि निजी मामिलामा धेरै बोल्दा समस्या आएको र जो पायो त्यो सँग नबोल्नु भनेर छोरी, नातिनीहरुले सम्झाएको आमाले बताउनुभयो । ‘राष्ट्रपती मेरो छोरी हो, म त हैन नि । आफ्नो–आफ्नो चाहनाको कुरा हो । खुसी जे गर्दा भईन्छ त्यही गर्ने हो,’ आमाले थप्नुभयो, ‘मलाई यो वृद्धाश्रममै स्वर्गीय आनन्द छ ।’ त्यसपछी मैले उहासँग केही प्रश्न संवाद गरेँ जुन जस्ताको त्यस्तै यहाँहरु समक्ष पेश गर्दछु,
के गरेर दिन विताउँदै हुनुहुन्छ ?
फूल र बिरुवालाई पानी हाल्छु । पूजाआजा गर्छु । यस्तै छ ।
स्वास्थ्य कस्तो छ ? दुःख, बिमार छ कि ?
अब उमेर ढल्केपछि अलि अलि दुःख बिमार भएन भने के मजा भयो र ? तर अहिलेसम्म भगवानको कृपाले बाँचिरहेकै छु ।
एक्लै टोलाएर बसिरहनु भएको रहेछ । के सोच्दै हुनुहुन्थ्यो ?
कोसँग कुरा गरौं त ? यिनै बृद्ध–बृद्धा हुन् साथीहरु । कोही कान सुन्दैनन्, कोही कुरा बुझ्दैनन् ।
अनि छोरी, नातिनीहरु, आफन्तहरु भएको ठाँउमा जानुहोस् न त… गएको त हो । अहिले यतै काम छ । बेलाबेलामा जाने–आउने चलिरहन्छ ।
त्यस्तो त पाहुना जस्तो भैहाल्यो नि हैन र ?
हामी सबै दुई दिनको पाहुना नै हौ । यो माया मोहको सांसारिक दुनियामा जति ठूलो महल भए पनि, सुन हिरा मोतीले ढपक्कै ढाकिए पनि आखिर यो भौतिक शरीर त्यागेर जानेबेला एकसरो लुगा नि फुकाल्छन् । जहाँ बस्ने मन हुन्छ, त्यहाँ घर हुन्छ । उहिले–उहिले ओडारमा पनि बस्थे मानिसहरु । आनन्द मिल्छ भने जहाँ बस्दा नि भयो ।
भनेपछि राष्ट्रपति निवासमा बस्दा आनन्द मिलेन ?
यो त कुरा बिगार्ने र उही पहिलाको जस्तो मलाई विवादमा ल्याउने प्रश्न गर्नुभयो । आनन्द भन्ने कुरा कहाँ बस्दा लाग्छ लाग्दैन त्यो आफूले चाहेर मात्र पनि हुँदैन । कतिपय कुराहरु चाहँदा चाहँदै पनि पूरा हुन सक्दैनन् । छोरीले सँगै बसौं आमा नभनेकी हैन । तर मेरो मनले मानेन ।
तपाईंको छोरी राष्ट्रपति भवनमा, तपाई आमा चाँहि वृद्धाश्रममा । यो अलिक सुहाएन कि ?
हो, धरैको प्रश्न यस्तै छ । तर यसको उत्तर दिनु आवश्यक छ जस्तो पनि लाग्दैन । हिजो गाउँमा किसानी काम गरेर बसियो । सुख–दुःख जीवन निर्वाह गरियो । अझै पनि गाँउलेहरु जो मेरा साथिहरु थिए, उनिहरु गाँउमा नै रमाईरहेका छन् । म धर्मकर्ममा विश्वास गरेको मान्छे । पाथिभरा र बराह क्षेत्रको समिपमा बसेको छु । महलको सुख सुविधा किन चाहियो र ?
छोरी महलमा बसेपछि आमा पनि संगै बस्दा के भयो त? एक मुठि चामल बढि पकाउने त हो नि होइन र ?
त्यो मेरो छोरीको निजी घर हैन । देशको सम्पति हो । अब उनीहरु व्यस्त हुन्छन् । त्यहाँ ठूला–ठूला मान्छे आउँछन् । देशको मुख्य नेतृत्वमा बसेका ठूला मानिसहरुलाई स–सना कुरामा किचलो गरिदिनु हुँदैन । वातारवरण सहज गराइदिनुपर्छ । मेरो पो छोरी हो त, देशको राष्ट्रपति हुन् नि उनी । यहाँ आमा–छोरीको, नातापाताको कुरा आउँदैन । चामल त यही प्रश्स्त छ । हाहाहा… (लामो हाँसो )
तर एउटा कुरा, तपार्इं यो वृद्धाश्रममा नबसी नहुने भन्ने त छैन होला नि ?
मैले यशोधा पाण्डेसँग मिलेर २०५८ सालमा यो चतरामा श्री रामकुञ्ज अनाथ महिला आश्रम खोलेकी हुँ । म यो आश्रमको संस्थापक अध्यक्ष हुँ । माया लाग्छ नि । मेरा लागि यो राष्ट्रपति भवनभन्दा ठूलो कुरा हो । मोरङको बाहुनी, गाउँमा ६ बिगाहा जमिन पनि छ । त्यहाँको उत्पादन यहि आश्रमको लागी प्रयोग गर्छु । वर्षको ३ महिना काडमाडौंको घर र बाँकी समय मोरङको खेती र आश्रममा बित्छ ।
त्यसो भए काठमाडौमा ३ महिना छोरीसग बस्ने गर्नु भएको छ हो ?हैन, त्यहाँ मेरा अरु आफन्तहरु पनि छन् ।अब फेरि छोरी भेट्न जानु हुन्न त ?
किन नजाने ? म फर्किएको धेरै भएको छैन । केही दिन बसँे । पहिला त छोरी भेट्न यही आएकी थिइन् । अहिले फेरि राष्ट्रपति बनेपछि कामको चाप होला । छोरीको फुर्सद मिलेमा हाम्रो भेट पक्कै हुनेछ । हुन त म काठमाडौं गए पनि, छोरी चतरा आए पनि आखिर आमा–छोरीको भेट हुने हो ।
राष्ट्रपती निवास बस्दा कस्तो महसुस भयो नि ?
खुसी लाग्यो । सन्तानको खुसी नै आमाको खुसी हो । राजनीतिमा धैरै पीडा, दुःख, कष्ट बेहोरेकी छोरी आज देशको अबिभावक बनेकी छिन् । रमाइलो पनि लाग्छ । तर आफू बुढी मान्छे, त्यहाँ भजन गाएर समय बिताउने कुरा भएन ।
छोरीसँग वस्दा के गफगाफ गर्नुभयो नि ?
उनीसँग लामो गफ गर्ने फुर्सद छैन । म धेरै कुरा जान्दिन । खायो, सुत्यो, उठ्यो । म त बिरामी हुँला जस्तो पो भएँ ।
अबको योजना के छ त ?
यो आश्रमलाई अझै व्यवस्थित र ठूलो बनाउने मन छ । अलि धेरै बृद्धाहरु राख्न सकियोस् । सामाज सेवामा मेरो धेरै रुची छ । उमेर, जाँगर र बल हुदाँसम्म आमा बुवालाई छोराछोरीले हेर्छन् । तर बुढो हुँदै गएपछि आमा बाबुलाई हेर्न गारो मान्दा रहेछन् । सबैका छोराछोरी त्यस्ता हुँदैनन् है फेरि ।
किन यस्तो महशुस भयो तपाईलाई ?
किनभने छोराछोरी अष्ट्रेलिया, जापान, जर्मन, अमेरिकामा बस्छन् । आमाबाबुलाई वृद्धाश्रममा राख्न खोज्छन् । पहिला धेरैले मसँग पनि कुरा गरे । तर यो आश्रमको क्षमता ठूलो छैन । सरकारले सहयोग गर्यो भने भविष्यमा अझै धेरै बावु–आमा राख्न मिल्ने क्षमताको आश्रम बनाउने र छोराछोरीले नहेरेका बाबुआमालाई राख्ने इच्छा छ ।
अफ्ठ्यारो लाग्दैन भने बताईदिनुहोस् न, तपाईको छोरीले (राष्ट्रपती) ले तपाईलाई हेर विचार नगरेको भन्ने आरोप साँचो हो ?
अब भनम् भने त कुरा धेरै आउँछन् हगि । मनको कुरा बोलेर साध्य लाग्ने जमाना पनि छैन । तर खै किन हो म यहि बस्दा खुसी हुन्छु । म यहाँ बस्नुमा न छोरीको दोष छ, न आफन्तहरुको नै । मलाई केहि कुराको कमि छैन । जहाँ बसेपनि के भयो र ? उमेर पुगेपछि छोराछोरी साहारा हो भन्छन् । त्यो समय अझै आइसकेको छैन मेरा लागि । किनभने म स्वस्थ छु, रोग बिमार केहि छैन ।
हल्ला त राष्ट्रपतीले आमालाई वृद्धाश्रममा लगेर राख्नुभयो भन्ने फैलाइएको छ नि ?
यो म अध्यक्ष भएको वृद्धाश्रम हो । छोरिलाई दोष नदिनु ।
आफू अध्यक्ष भएको वृद्धाश्रममा आफू नै बस्नु पर्छ भन्ने पनि छैन होला । तपाई संचाललक पो हो त । यहाँ देशको इज्जतको कुरा हुन्छ, सुरक्षाको कुरा हुन्छ । हैन र ?
मैले इज्जत फाल्ने नराम्रो काम केही गरेकी छैन । पुलिस भाइहरु आउँछन्, कहिले काँहि । के छ आमा हाल खबर भनेर सञ्चो विसञ्चो सोधेर जान्छन् । सायद छोरीले बुझ्न पठाएकी हुन् कि । पुलसिले तपाईं ठूलो मान्छेको आमा हुनुहुन्छ, हामीलाई चिन्ता चासो हुन्छ, केही दुःख समस्या छ भने भन्नुहोस् है, हामी तत्कालै समाधान गर्छौं भन्छन् । म भन्छु – म भगवानको साथमा छु । केही समस्या छैन ।
भगवानको साथमा छु भनेर छोरीको प्रतिष्ठालाई पनि त भुल्नु भएन नि, होइन र आमा ?
प्रतिष्ठा जोगाउन छोरीले राम्रो काम गरुन् । आमाबाट गल्ती भएको कहिल्यै सुन्नु पर्ने छैन ।
तपार्इंको सेवाको भाव देखेर खुसी लाग्यो, अन्तिममा केही भन्नु छ कि आमा ?
कुरो नबिगारिदिनु, सबै राम्रो–राम्रो भनिदिनु । मेरा कारणले कसैलाई समस्या नहोस् । बाबुलाई आशिर्वाद ।
स्रोत : लोकान्तर